China Ethyl Ethanol mveliso kunye nabenzi | Zhongrong
I-Ethanol, eyaziwa njenge-molecular formula C2H5OH okanye i-EtOH, lulwelo olungenambala, olucacileyo, olunokutsha nolungazinzanga. I-Ethanol eneqhezu elingaphezulu kwama-99.5% ibizwa ngokuba yi-anhydrous ethanol. I-Ethanol luhlobo lotywala, sesona sithako sewayini, Into eyaziwayo njengotywala, lulwelo olunokutsha nolungenambaliso elubala kwigumbi lobushushu begumbi, uxinzelelo lomoya, isisombululo samanzi sinevumba elikhethekileyo, elimnandi, kwaye liyacaphukisa. I-Ethanol incinci kakhulu kunamanzi kwaye inokunyibilika ngokufanayo nangaliphi na inqanaba. Unyibilike emanzini, i-methanol, i-ether kunye ne-chloroform.
Igama: i-ethanol engenamanzi, i-anhydrous alcohol
Ifomula yeMolekyuli: CH3CH2OH ， C2H5OH
Igama lebrand: Itekhnoloji yeZhongrong
Imvelaphi: Tangshan, Hebei
CAS akukho. : 64-17-5
Ubunzima beMolekyuli: 46.06840
Ukuxinana: 0.789 g / mL (20 ℃)
Ukucaciswa kwemveliso: GB / T678-2002 kwibakala eliphezulu
HS Ikhowudi: 2207200010
Ukupakisha imigaqo: Umgqomo / ubuninzi (itoni)
Iimpawu ezibonakalayo nezomzimba
Okokuqala, i-ethanol sisinyibilikisi esibalulekileyo, esisetyenziswa ngokubanzi kunyango, ipeyinti, iimveliso zococeko, izinto zokuthambisa, ioyile kunye nezinye iinkalo.
Okwesibini, i-ethanol yinto ebalulekileyo esisiseko yemichiza, esetyenziselwa ukuvelisa i-acetaldehyde, i-ethylamine, i-acetate ye-ethyl, i-acetic acid, njl. Okwesithathu, i-75% yesisombululo se-ethanol aqueous has a strong bactericidal and is a most used sebulala iintsholongwane kunyango. Kwi-2017, amasebe ahlukeneyo kunye neekhomishini e-China ngokudibeneyo bakhupha imigaqo-nkqubo efanelekileyo ukukhuthaza ukusetyenziswa kwilizwe lonke kwepetroli ye-ethanol enefuthe ekupheleni kwe-2020.
Hlela imveliso ngokungqinelana nomgangatho weshishini "Anhydrous ethanol (Q / RJDRJ 03-2012)".
Egqithileyo Iziqwenga ezili-150 zoTywala / iHyamine Sula
Okulandelayo: Ethyl acetate （≥99.7%）